Izindaba - Umkhiqizo wezingubo zangaphandle uKathmandu umemezela iphrojekthi yemephu eyindilinga
Umkhiqizo wezingubo zangaphandle uKathmandu umemezela iphrojekthi yemephu eyindilinga
Umkhiqizo wezingubo zangaphandle osuselwe eNew Zealand uKathmandu ubambisene neThe Renewal Workshop, umhlinzeki ohola phambili wezixazululo eziyindilinga, ukuqala iphrojekthi yemephu eyindilinga yokuhlinzeka ngezinhlelo zokuvuselela nokuvuselela amakhasimende ayo ngokuzayo. Lo mkhiqizo uphinde wanxusa osomabhizinisi bezemfashini kulo lonke elase-Australasia ukuthi bahlanganyele nabo ekwehliseni udoti wendwangu.
“Sijabule kakhulu ngokubambisana neThe Renewal Workshop ukusebenzisana ukwenza iqhaza lethu ekwehliseni udoti wezindwangu, nokuba ngabokuqala emabhizinisini amaningi anethemba lokuthi ase-Australia naseNew Zealand asebenzela ukusebenzela ukujikeleza. Lokhu kubambisana kuyisinyathelo sokuqala esibalulekile ekufezeni inhloso yethu yokusimama ka-2025 yokuhlanganisa abaphathi bezomnotho abayindilinga emisebenzini yethu yebhizinisi, ”kusho uReuben Casey, oyi-CEO, uKathmandu, ngokwemibiko yabezindaba yase-Australia.
“Njengebhizinisi elithembele kozakwethu abasebenzisanayo nabathuthukayo kanye nokuzibophezela ngokuqinile ekusimameni, asikwazi ukucabanga ngozakwethu ongcono kunoKathmandu ukuhlola amandla emikhuba eyindilinga ngenqubo yethu yeMephu Yesiyingi,” kusho uNicole Bassett , umsunguli, I-The Renewal Workshop.
Ubambiswano luhlobo lwalo lokuqala olwakhelwe ukubhekana nodoti wendwangu esifundeni sase-Australasia.